Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda colaadeed ee Libya, mar uu Sabtidii khadka telfoonka kula hadlay dhiggiisa dalka Turkey Tayyip Erdogan, sidaasna waxaa xaqiijiyay Aqalka Cad.
Afhayeenka Aqalka Cad, Judd Deere, ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku yiri “Madaxweyne Trump wuxuu mar kale hoosta ka xarriiqay walaaca ah in faragelinta shisheeyaha ee Libya ay xaaladda uga sii dareyso, iyo baahida loo qabo in si deg deg ah loo qaboojiyo xiisadda.”
Haftar ayaa taageera ka hela dalalka Russia, Masar iyo Imaaraatka Carabta.
Ciidamada uu hogaamiyo Haftar ayaa dib uga baxay dhowr aag oo ay horey ugu sugnaayeen, laakin waxa ay Sabtidii weerareen saldhigga ciidamada ee Yarmouk ee Tripoli, halkaasi oo ay ku dileen dhowr askari.
Haftar, ayaa farriin cod ah oo uu u soo diray ciidankiisa ku boorriyey in ay la dagaalamaan waxa uu ugu yeeray faragelinta “gumeysi” ee Turkey illaa laga jebiyo, taasi oo uu tixraac uga dhiganayay muddo kooban oo ay Imbaraadooriyaddii Cuthmaaniyiintu maamuleen Tripoli.
Afhayeenka Madaxweynaha Turkey, Ibrahim Kalin, ayaa wareysi uu siiyey NTV ku sheegay in dalkiisu aanu u hogaansami doonin “hanjabaad ka timaadda Haftar ama cid kale.”
“Beesha Caalamku waa in ay ka soo hor jeesataa Hafter. Waxaan u baahannahay in aan miiska ugu laabanno sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aan u gaarno xal siyaasadeed,” ayuu yiri Kalin.